Dowladaha Midowga Yurub Oo Isku Raacday Iney Joojiyaan Soo Dhoofsashada Saliida Iran, Saudi Arabia oo buuxin doona booska Euro - iftineducation.com
Dowladaha midowga yurub ayaa isku raacay marka ugu horeysay iney joogiyaan soo dhoofsashada shidaalka Iran laakiinse wali goaan rasmi ah kama gaarin goorta ay sameynayaan, diblomaasi u dhashay yurub ayaa yiri Arbacadi. Mada Energiga Midowga Yurub GuentherOetinger ayaa dhahay hadi lajoojiya dhoofsashada Shidaalka Iran, waxaan kazoo iibsan karnaa meelo kale, ee ugu horeeysa wadamada xubinta ka ah OPEC, sida Saudi Arabia.
Heshiiskan, oo sababay kor ukaca sicirka shidaalka ayado ay kahoreeysay wadahadal maalmihii ugu danbeeyay bishii Desember u dhaxeeyay wakiilada ay soo dirsadeen Yurubta midow, sidu yiri diblomaasi.
Durbadiba waxaa kahoryimid fikradaas ay ugu horeyso Gariig, oo lagu falanqeeyay wadahadalka, seey sheegeen.
Mamnuucida Eropa shidalka Iran waxey kamid tahay dagaalka reer galbeedka ugu soo horjeedaan si wada jir ah si ay cadaadis ugu saaraan Tehraan si ay ujoojiso Programkeda Nuklerka, ay kaga walwal sanyihiin in ay sameysato bom atom. Tehraan waxey sheegtay ujeedkeeda inuu yahay mid nabadgalyo ku saleysan.
Mareykanka waxow ku riday xukun habeenkii sanadka cusub heyadaha lacagaha ee lashaqeeya Central Bank Of Iran. Arintaan ayaa lasaadaalinayaa iney wax u dhimeyso suuqa iibgeynta shidaalka Iran.
Iran waxey u dhoofisaa kudhawaad 450.000 oo fuusto maalintii wadamada midowga yurub, tan ayaa waxey noqoneysaa suuqa labaad ee ugu weyn shidaalka Iran marka laga reebo China (Aden).